नेपालीलाई गाली गर्ने वेबसिरिजका कारण अनुष्का शर्माविरुद्ध फेरि अर्को मुद्दा ! – Dcnepal
नेपालीलाई गाली गर्ने वेबसिरिजका कारण अनुष्का शर्माविरुद्ध फेरि अर्को मुद्दा !
प्रकाशित : २०७७ जेठ ११ गते १४:१०
काठमाडौं। नेपालीलाई अपशब्द प्रयोग गरिएको विषयमा बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माको वेब सिरिज पाताल लोक यसअघि नै विवादमा छ । जातिवादी गाली गरेको भन्दै वेब सिरिजकी निर्माता अनुष्का शर्माविरुद्ध वीरेन सिंह गुरुङले कानुनी नोट पठाइसकेका छन् । उनले यस सिरिजबाट जातीय गालीको अंश हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यही बीचमा यो वेबसिरिजकै कारण अनुष्का शर्माविरुद्ध अर्को उजुरी परेको छ ।